koorsooyinka | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Posts in category koorsooyinka
Waxa aan kahadleynaa cudur ku dhaco maqaarka Aadanaha oo afka qalaad lagu yiraahdo (Albinism), kaas oo ah in qofku uu ku dhasho maqaar gooni ah (Casaan ah), timaha illaa iyo jirka aadanaha dhanna waa uu kamuuqdaa. Hadaba inta aan cinwaanka sharraxaaddiisa ugalin waxa aan isku dayay in aan eray bixin usameeyo cudurkaan, waxaana iisoo baxay (Cudurka Dhiinka-Albinism disease), sababtoo ah dhiin waa midab ka turjumaayo kalarka gaduudka ah. Sameynta eray bixin ma’ahan wax sahlan sidaas oo ey tahayna cinwaan waliba oo larabo in lagu qoro luqadda hooyo waxa uu ubbaahanyahay “Eray bixin”!. Waa Maxay Cudurka Dhiinka (Albinism-ka)? Cudurkaan waxa uu …
AkhriCaafimaadka iyo SayniskaCaafimaadka iyo Sayniska
Aayodhiinta inta badan waxaa laga helaa cunnooyinka aan cunno caadi ahaan, gaar ahaan cunnooyinka cusbada leh, qudaarta iyo cunnooyinka laga helo badda. Waxaa jiro xilliyo uu jirkeenu ubbaahanyahay aayodhiin, waana marka ey jirkeena kuyaraato aayodhiinta, waxaana yareeyo cudurro laxiriiro qanjirka soo saaro aayodhiinta ee looyaqaan (thyroid gland). Aayodhiintu waxa ey leedahay xaddi loogu talagalay qiyaas ahaan 15–20 mg, 80% oo kamid ahna waxaalaga soo daayaa qanjirka thyroid-ka. Calaamadaha Lagu Garto Yaraanshaha Aayodhiinta jirka? Dhuunta oo soo buurato. 2. Miisaanka oo sidhaqso ah u siyaada. 3. Tabar darri iyo daal. 4. Garaaca wadnaha oo isbedala ama qal-qal uu kudhaco. 5. Caado …
Maamulka istaraatijiyada ganacsiga waa nidaam ama qaab loogu tala galay in loo sharaxo hadafka ururka wali si tafaatiran. Si loo gaaro hadafyada shirkada waxaa loo baahanyahay in si fiican loo qeexi karo qaababka lagu gaari karo hadafkaas. Si loo gaaro hadafyada shirkada, shirkada waxay u baahantahay inay sameysato istaraatijiyad si fiican loo fahmi karo. “Guul walbo waxay leedahay qaabab lagu gaari karo, haddii la waayo qaababka lagu gaari karo guulaha waxaa markii horeba qaldanaa hadafyada la hiigsanayay” *Cabduljabaar Sheekh Maamulka istaraatijiyada ganacsiga waxay shirkadaha u horseedaa guulo, waa haddii marka horreba loo sharaxo si wanaagsan oo tafaatiran. Haddii ay …